nepali congress – Karnalisandesh
कांग्रेस महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ। पटक–पटक कार्यतालिका परिवर्तन गरी पछिल्लोपटक मंसिर २४ देखि २६ सम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले अब कार्यतालिकामा कुनै हेरफेर नहुने र निर्धारित समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सबै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाइएको बताए। महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्न कांग्रेस क
गगन थापाको देउवालाई प्रश्न: ‘कति सजिलै सर्छ अधिवेशनको मिति?’
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले पार्टी नेतृत्वप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता थापाले कति सजिलै सर्छ अधिवेशन ? भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कति सजिलै सर्छ अधिवेशनको मिति? १३ जिल्लाको वडा अधिवेशनकै टुंगो छैन। कहिल्यै विधिमा चल्नु नपर्ने, थितिमा वस्नु नपर्ने, वेथितिको जिम्मा लिनै नपर्ने।’ उनले अगाडि लेखेका छन
कांग्रेसमा युवा नेता को कता ?
काठमाडौँ। सभापति शेरबहादुर देउवा गुटका सम्भावित महामन्त्रीका उम्मेदवार प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गुट परिवर्तन गरिसकेका छन्। गगन थापाले पनि कृष्णप्रसाद सिटौला गुट छोडेका छन्। देउवालाई खुमबहादुर खड्का गुटले महामन्त्रीका लागि दबाब दिइरहेको छ। पूर्णबहादुर खड्का, मोहन बस्नेत, शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाललगायतका खुमबहादुर गुटका नेताहरूले महामन्त्री र सरकारमा मन्त्रीका लागि देउवालाई
कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति परिमार्जित
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने गरी बाँकी अधिवेशनको समयतालिका संशोधन गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचन समिति संयोजक महादेव यादवका अनुसार वडा, पालिका, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र जिल्ला अधिवेशनको मिति परिमार्जन गरिएको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन हुन बाँकी २० जिल्लामा ५ अस
थाहा नगरका सबै वडामा सर्वसम्वत नेतृत्व चयन
मकवानपुर। जिल्लाको थाहा नगरपालिकाका १२ वटै वडामा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेसन सम्पन्न भएको छ। नगरका १२ वटै वडामा आइतबार एक साथ वडा समिति तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरेको छ। अधिवेसनबाट नगरको वडा सभापतिहरुमा क्रमशः १ रुपचन गोपाली, २ गोकर्ण बरुवाल, ३ बिक्रम गोपाली, ४ श्री कृष्ण केसी, ५ सन्तबाहादुर गुरुङ, ६ कालिचरण अधिकारी, ७ शिवराज थिङ, ८ रामकुमार घलान, ९ राजेन्द्र खत्री, १० कुलचन्द्र अर्याल, ११ च
कांग्रेसमा युवाहरूको आर्कषक उपस्थिति
कालिकोट। दैलेखकी १९ वर्षीया स्वस्तीका महत, अछामकी २२ वर्षीया जानकी रावलजस्तै धेरै युवाहरू कांग्रेसको जारी १४औं महाधिवेशनबाट वडा तहको नेतृत्वमा आएका छन्। राजनीतिमा युवाहरुको प्रवेशले कांग्रेसमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ। दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–३ कि स्वस्तीका महत भखर १९ वर्ष लागिन्। स्वास्थ्यकर्मी बनेर जनताको सेवा गर्ने सोच बनाएकी महत कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट वडा सभापतिमा निर्वाचित भएकी छन्।
जुम्लाका ६० वटै वडामा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन
जुम्ला। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। यसै क्रममा जुम्लाका ६० वटै वडामा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गरिएको छ। कांग्रेसका युवा नेता तथा संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण शाहीका अनुसार शुक्रबार वडा अधिवेशन सहमतिका आधारमा सम्पन्न भएको हो। नेता शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘वडा तहदेखि अधिवेशनको प्रकृया आरम्भ भएर केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म एउटा आकर्षक सांगठनिक पिरामिड
मीन विश्वकर्माले दिए अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजीनामा
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले दुबै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा दलितलाई उचित स्थान नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले महाधिवेशनको मुखमा पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकाले उपत्यकालगायत देशभरका दलित समूदायलाई पार्टी प्रवेश र प्रतिनिधित्वमा पूर्णत निषेध गर्ने देखिएको सभापति